Izici Zeplatifomu Yezentengiso Yezenhlalo Yezenhlalo | Martech Zone
Uma uyinhlangano enkulu, kunezici eziyisithupha ezibucayi zesoftware yebhizinisi oyidingayo njalo:
Izigaba Ze-akhawunti - mhlawumbe into eceliwe kakhulu kunoma iyiphi ipulatifomu yebhizinisi yikhono lokwakha ama-akhawunti avela ngaphakathi kwesisombululo. Ngakho-ke, inkampani yomzali ingashicilela egameni lomkhiqizo noma i-franchise ngaphansi kwabo, ifinyelele idatha yabo, isize ekuthumeleni nasekulawuleni ama-akhawunti amaningi, nasekulawuleni ukufinyelela.
Izinqubo Zokugunyazwa - Izinhlangano zebhizinisi ngokuvamile zinezendlalelo zokuvunyelwa ukubhekana nokulandelana okusemthethweni, kokulawula, nokusebenzisana kwangaphakathi. Ukuvuselelwa kwemithombo yezokuxhumana, isibonelo, kungasuka kumhlobo kuya kumdwebi wemidwebo, kumphathi, kwezomthetho, kubuyele kumhleli, kudlulele kumshicileli. Ukwenza lokhu okunikezwa ngesandla nge-imeyili noma ngamaspredishithi kungaphuma ekulawuleni
Ukuhambisana, Ukuphepha, izingodo, nezipele - Ezinkampanini ezilawulwa kakhulu noma zomphakathi, ezokuphepha zibaluleke kakhulu ngakho-ke amapulatifomu adingeka kakhulu ukuba enze izinqubo zokucwaninga ezivela eceleni, futhi abe nezinqolobane zangaphakathi nezipele zomsebenzi ngaphakathi kohlelo.
Ukungena ngemvume okukodwa (SSO) - Izinkampani zifuna ukulawulwa kwangaphakathi kwezicelo ezingena ngemvume ukuze zingene endaweni yesikhulumi ngokujwayelekile ziphathwa ngomnyango we-IT noma ngeplatifomu yehhovisi labo.
Izilawuli Zokufinyelela - Izindima nezimvume zibalulekile kwisoftware yebhizinisi ukuqinisekisa ukuthi othile akakwazi ukudlula izinqubo ezivunyelwe noma enze izenzo angagunyaziwe ukuzenza.
Izivumelwano Zamazinga Ezinsizakalo (SLA) - Esimweni somhlaba jikelele, isikhathi sokugcina sibucayi ngakho-ke kuvunyelwene nge-SLA ngokuvamile kuyadingeka ukuthi basayine inkontileka nanoma iyiphi ipulatifomu yebhizinisi. Futhi, ukugcinwa nesikhathi sokuphumula kudalulwa esidlangalaleni ukuqinisekisa ukuthi akuphazamisi ukusebenza.
Ukusekelwa kweLimi Lama-Multi - Siphila emnothweni womhlaba wonke, ngakho-ke ikhono lokusekela izilimi eziningi ngaphakathi komsebenzisi wesikhulumi kanye nokushicilela ngezilimi eziningi kubalulekile. Ngeshwa, izilimi ezisuka kwesokudla ziye kwesokunxele zivame ukucatshangelwa ngemuva njengoba amapulatifomu esikala bese kuba nzima ukubuyela emuva uphinde wenze isisombululo kabusha.
Indawo Yesikhathi Esiningi - Ungamangala ukuthi izinkampani ezisencane zingazinaki kanjani izindawo zesikhathi lapho kushicilelwa ezokuxhumana. Ngaphandle kokusetha umkhawulo wesikhathi womsebenzisi ngamunye ngaphakathi kwipulatifomu, ungahlela ukuxhumana kwakho okubhekiswe endaweni yesikhathi yethagethi okuyiwa kuyo? Izinkampani eziningi zinezilungiselelo zesikhathi esine-akhawunti ebanzi kunokufaka izindawo zesikhathi kuyo yonke indawo.
Ukuhlanganiswa - Izindlela Zokusebenza Zokuhlela (Ama-API) nokuhlanganiswa okukhiqizwayo kwamanye amasistimu kubalulekile ekusebenziseni okuzenzakalelayo, ukufinyelela kwedatha, kanye nokubikwa kwesikhathi sangempela.
Insurance - Siphila ezweni elinenkani, ngakho-ke imfuneko yokuthi ipulatifomu inomshuwalense owanele wokumboza noma yiziphi izimangalo zomthetho nayo iyadingeka ngaphakathi kwamapulatifomu wesoftware yebhizinisi. Mhlawumbe ipulatifomu ligqekeziwe futhi kwavela amacala avela kumakhasimende wokugcina… umhlinzeki wakho angabophezeleka ukukhokha izindleko.
Faka amapulatifomu ezokuxhumana nabantu
Okukodwa okungenhla kudinga ukufakwa kupulatifomu yakho yezokuxhumana uma uyinkampani yebhizinisi. Ama-Social Media Platform ngokuvamile anezici ezilandelayo:
Inqubo Management - Ikhono lokuqalisa ukulandelana kusuka eqenjini elilodwa labasebenzisi ngaphakathi kwesistimu liye kwelinye kubalulekile. Umsebenzisi ngamunye unezindima nezimvume zakhe ezikhawulela amakhono abo Izibonelo:
Umkhiqizo wakho ukhulunywa ku-inthanethi (umakiwe noma ngaphandle kokumakwa). Ngabe isicelo singadluliselwa ekuthengisweni uma kungumbuzo walokho okulindelwe? Ukuxhaswa kwamakhasimende uma kuyinkinga yamakhasimende? Ukumaketha uma kuyisicelo semidiya?
Unehlelo lomkhankaso olufaka ukushicilelwa komphakathi ngezinsuku zokugcina ezibekiwe. Ingabe ipulatifomu yakho yemidiya yokuxhumana nabantu iyaqala futhi isebenze emgqeni ohamba ngethimba lakho lokuqukethwe, kuya kugrafu yakho noma kwithimba lamavidiyo, eqenjini lakho elisemthethweni noma elilawulayo, kuze kuvunyelwe futhi kuhlelwe?
Ukuhlela Namakhalenda - Ezingeni lebhizinisi kanye ne-subaccount, ungakwazi yini ukuhlunga kalula futhi ugcine ikhalenda lakho lezokuxhumana bese unikeza imisebenzi?
Ukulalelwa Komphakathi Nokuhlaziywa Kwemizwa - Ezingeni lebhizinisi kanye ne-subaccount, ungayisebenzisa yini imikhankaso yokulalela umphakathi yabantu, imikhiqizo, kanye nezimboni kanye nokuhlaziywa kwemizwa? Ungakwazi yini ngokushesha ukuhambisa izicelo ngaphakathi ukuze wazise iqembu elifanele ukuthi liphendule? Ungabika ngemizwa ngokuhamba kwesikhathi ukuqinisekisa ukuthi ulondoloza ubudlelwane obuhle namakhasimende akho?
Ukuhlanganiswa - Ungasebenza ngaphakathi kwepulatifomu emaphakathi ukuxhumana, ukuthumela imiyalezo, nokushicilela ngesiteshi ngasinye semidiya yezokuxhumana kanye ne-akhawunti oyiphethe ezingeni lebhizinisi noma le-subaccount? Ungabuyisa idatha emuva ekusekelweni kwamakhasimende noma ohlelweni lwakho lobudlelwano bamakhasimende uma kunezicelo? Ungakwazi yini ukusunduza imibuzo yokuthengisa ohlelweni lokusiza ukukhomba amathuba kanye nokuxhuma amachashazi phakathi kwemikhankaso nokunakekelwa kokuthengisa?
Ukuhlanganiswa Kohambo - Uyakwazi ukunika amandla izingcingo zohambo lwamakhasimende omnichannel nemicimbi ngomsebenzi wezokuxhumana oxhumana naye njengento enikelayo?
Ukufunda komshini - Ukusetshenziswa kwe-AI ukuthola ukuqonda okujulile kulo lonke uphawu, izingxoxo online, ukuzibandakanya nemiyalezo ethile (amagama angukhiye, izithombe), kanye nethuba lokutholwa, i-upsell, noma ukugcinwa.
Ukubika kanye namaDeshibhodi - Kuwo wonke umsebenzi, ungadala imibiko eqinile ezingeni lenkampani nelama-akhawunti angakwazi ukusefa kalula, ahlukaniswe, bese uqhathaniswa nomsebenzi kuyo yonke imikhankaso, izinkathi noma isikhathi esithile?
Lezi zici zengezwa kuzici zakho ezijwayelekile zemidiya yokuxhumana nabantu ezenza i-automation isebenze, isebenze kahle, ishejule nokwenza ikhalenda yemizamo yakho yezokuxhumana.
I-Salesforce Social Studio
ISalesforce Social Studio inikeza zonke izici ezidingekayo ku-Enterprise Social Media Management, kufaka phakathi:
Ukuphatha - ukuphatha abasebenzisi nokufinyelela kuyo yonke imikhiqizo ye-Salesforce.
Shicilela - ikhono lokuhlela nokushicilela kuma-akhawunti amaningi nakwiziteshi.
Bandakanya - ikhono lokulinganisa nokujoyina izingxoxo, bese ucubungula ukugeleza komsebenzi kusevisi noma ukuthengisa.
Hlaziya - qapha futhi ulalele ama-akhawunti aphethwe futhi uthole ukuqonda kuma-social media ngamagama abalulekile nemizwa.
I-Artificial Intelligence - I-Salesforce Einstein ingasetshenziselwa ukuhlukanisa izithombe ngokuzenzekelayo ngezici ukuthola ukuqonda okujulile ngokuzibandakanya.
Yini i-Best Enterprise Social Media Platform?
Akuwona wonke amapulatifomu ezokuxhumana nabantu enziwa ngayo yonke into oyibona ibhalwe ngenhla. Bengihlala ngikhuthaza amaklayenti ami ukuthi adlule ngokulandelana kwezinyathelo lapho ukutshala imali kwezobuchwepheshe bokumaketha lokho ngokuvamile akufaki ukuthandwa kwepulatifomu, imiklomelo yayo, noma ukuqashelwa kwayo ngamafemu wezinkampani zangaphandle.
Qala ngemigomo yakho - yini ozama ukuyizuza ngenkundla yezokuxhumana? Qonda i- inkinga, umthelela wayo enhlanganweni yakho, kanye nenani elinganikezwa yisixazululo esikhulu. Lokho kungafaka ukonga kokuzenzakalela kwangaphakathi, ukwenza izinqumo okungcono ngedatha yesikhathi sangempela, noma ukukhuphula ukugcinwa ngenxa yokubona umuzwa ongcono wamakhasimende.
Nquma Izinsizakusebenza Zakho - yiziphi izinsizakusebenza zangaphakathi (abantu, isabelomali, kanye nomugqa wesikhathi) okufanele uhambise kupulatifomu entsha. Unayo isiko lokutholwa? Ngabe unethimba elingabhekana nengcindezi yokufunda nokuthuthela ohlelweni olusha?
Khomba Izinqubo Zamanje - cwaninga amaqembu akho angaphakathi kusuka kubaphathi kuya kubasebenzi bakho ababhekene namakhasimende ezinhlelweni zokuxhumana nomphakathi onazo njengamanje. Qonda ukuthi kuphi ukukhungatheka kanye nokwazisa ngamapulatifomu nezinqubo zamanje. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi ukhetha isisombululo esizothuthukisa imizamo yenhlangano kunokuba siyilimaze. Lokhu kungenziwa kuhlu lokuhlola olwehlukile ekuhloleni inkundla yezokuxhumana yakho elandelayo.
Linganisa Abathengisi Bakho - Qhathanisa izinsizakusebenza nezinqubo zakho kumthengisi ngamunye bese uqinisekisa ukuthi ihlangabezana nawo wonke amakhono akhona owadingayo. Kungahle kube nezinqubo ezithile ezidinga ukusebenza lapho kusetshenziswa noma kuthuthwa… kepha zama ukuthola ukuthi uzoyisebenzisa kanjani inqubo ngayinye ngokuningiliziwe ukunciphisa ubungozi bokwamukelwa.
Linganisa Ithuba - Uma utshala imali kungxenyekazi ehlukile, ngokujwayelekile bazoba nezici ezintsha ezinikeza ithuba lokwenza ngcono imbuyiselo yakho ekutshalweni kwezobuchwepheshe.
Ukuhambisa imizamo yakho yemidiya yezenhlalo endaweni yesikhulumi esisha kungaba utshalomali olunomvuzo omangalisayo ekuthengisweni kwedijithali nemizamo yokumaketha yenkampani yakho. Khetha ngokuhlakanipha… futhi unganqikazi ukusebenza ne umcebisi noma umhlaziyi owazi kahle lo mkhakha futhi ongakusiza uhlole futhi ukhethe umthengisi wakho olandelayo.
Tags: imithombo yezokuxhumana yebhizinisiizici zokuxhumana zebhizinisiamapulatifomu ezokuxhumana ezinamabhizinisii-social crmsocial mediaanalytics media socialingobo yomlando yezokuxhumanaukuhambisana nabezindaba zenhlaloizinkundla zokuxhumana crmukuphathwa kobudlelwano bamakhasimende nabezindaba zenhlaloinkundla yezokuxhumana yezokuxhumana yesikhulumiukulinganiswa kwezokuxhumanaukuqapha ezokuxhumukushicilela ezinkundleni zokuxhumanaumthethonqubo wezokuxhumanaukuhlela ezokuxhumukuhlangana kwezinkundla zokuxhumanaukuhamba komsebenzi kwezokuxhumana
I-Email Design Trends yango-2021
May 20, 2013 ku-10: 59 AM
Sawubona Doug, ukubuyekeza okuhle! I-Shoutlet iyipulatifomu enamandla amakhulu, nakanjani! Ngiyethemba uphilile.